April | 2014 | landcampaigninmyanmar
Vice President U Nyan Tun_ Central Land Mangement Committee went down to the ground to Maubin and some delta towns
by Peace Societies Myanmar in Uncategorized Tags: Land Management Committe inpected Land Disputes
News on 19-April-2014
Central Land Management Committee chaired by Vice-President U Nyan Tun and Party along with Parliamentarians from Land and Land Related Disputes
Investigation Committee members called the mission to Maubin Township to inpect Land Disputes on the ground. It wasagood sign and welcome it. (Source: Share Mercy, Affected farmers from
နိုငျငံတျော ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ၊ ဒသေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးမြားကို ပိုမို ထိရောကျစှာ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲ ကွိုးပမျး ဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာ လုပျငနျးညှိနှိုငျးအစညျးအဝေး တှငျ နိုငျငံတျော သမ်မတကွီး ၏ လမျးညှနျ မိနျ့ကွားခကျြ | Myanmar President Office
Unicode does not appear readable. This is the message about Land Land and Reform Meeting delivered by President U Thein Sein.
နိုငျငံတျော ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ၊ ဒသေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးမြားကို ပိုမို ထိရောကျစှာ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲ ကွိုးပမျး ဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာ လုပျငနျးညှိနှိုငျးအစညျးအဝေး တှငျ နိုငျငံတျော သမ်မတကွီး ၏ လမျးညှနျ မိနျ့ကွားခကျြ | Myanmar President Office.
Vice-President U Nyan Tun delivers an address at Land Utilization Management Central Committee Meeting No. 1/2013 | Myanmar President Office
Vice-President U Nyan Tun delivers an address at Land Utilization Management Central Committee Meeting No. 1/2013 | Myanmar President Office.
Let Pa Daung Copper Mine Demonstration
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 9:55 PM0comments
Anit-Myint Sone Dam Demonstration on 4th April 2014
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 11:01 PM0comments
Land Return at Sagaing grabbed by the Military
စစ်ကိုင်းမှာ စစ်တပ်သိမ်းဆည်း လယ်မြေများ ပြန်လည် ပေးအပ်ပွဲကျင်းပ
12 April 2014 02:22(+0630) (လွန်ခဲ့သော 23 နာရီ ခန့်က)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့ ရေမျက်ရွာနဲ့ လယ်ကြီးရွာက တောင်သူ ၇၈ ဦးဆီက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေ ဧက ၅၀၀ ကျော်ကို စစ်တပ်က တောင်သူတွေဆီ ပြန်လည်ပေးအပ်ပွဲကို စစ်ကိုင်းမြို့တော်ခန်းမမှာ ဒီနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
လယ်ယာမြေတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်က ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား တွေကို အဆင့်ဆင့်တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလို့ လယ်ကြီးရွာက တောင်သူ ဦးမောင်ငယ်က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အမိအဖတွေ အဘိုးအဘွားတွေလက်ထက်က ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတွေပါ၊ အဲဒါတွေကို ပြန်လည်လုပ်စားခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့က လျှောက်လွှာတင်လိုက်တယ်၊ မြို့နယ်ရော ခရိုင်ရော မြေစာရင်းရောပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီ ခမရ ၃၃ ကိုလည်းတင်လိုက်တယ်၊ တင်လိုက်တော့ စစ်တပ်က တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တောင်သူတွေရော၊ ရပ်မိရပ်ဖတွေရော၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရော ခေါ်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပြီးတော့ စွန့်လွှတ်ပါတယ်၊ တောင်သူတွေကို ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ၃ လပိုင်း ၂၉ ရက်နေ့ကပြောပါတယ်”
အဲဒီဧက ၅၀၀ ကျော်ကို စစ်ကိုင်းမြို့ အမှတ် ၃၃ ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်က သံချပ်ကာတပ် သင်တန်းကျောင်း တည်ဆောက်ဖို့ သိမ်းဆည်းခဲ့ပေမယ့် သင်တန်းကျောင်းမဆောက်ဘဲ တပ်ဖူလုံရေးအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ သီးစားချထားတာလို့ သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ အခမ်းအနားမှာ မှုလပိုင်ရှင် တောင်သူ ၇၈ ဦးကို လယ်ယာမြေယာယီ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ(၃) ကို ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Lands In Our Hand – Focal (Ko Sithu)
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတွေကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခြင်း မရှိတဲ့အပြင် သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြတဲ့ ဒေသခံတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီး ဒေသခံတွေက ဦးပိုင်နဲ့ ၀မ်ပါင်ကုမ္မဏီတွေကို ကျိန်စာ တိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဆောင်သူ ၀က်မှေးရွာသူ ဒေါ်သွဲ့သွဲ့ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် ဒီကုမ္မဏီတွေ လက်ပံတောင်းဒေသကနေ အမြန်ထွက်သွားရေး အခုလို ၀က်မှေးရွာက နတ်စင်မှာ ကျိန်စာတိုက်တာလို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကလည်း တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့နယ်အတွင်း လယ်သမား ၆၀ ကျော်ကလည်း သူတို့ လယ်မြေသိမ်းခံရမှုအတွက် ဒီလို အလားတူ ကျိန်စာတိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Aside by Peace Societies Myanmar
Curse Ceremony the third at Myint Sone Dam
by Peace Societies Myanmar in Uncategorized Tags: Curse at Myint Sone (cross-river Ayarwaddy)
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လုံးဝဖျက်သိမ်းပေးဖို တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
မြစ်ဆုံ ကျိမ်စာတိုက်လို့ လမ်းရှောက် ဆန္ဒထုက်ဖော် သွားကြတဲ့ ကလေးတွေ သတင်း တတ်မလါသေးပါ…..စိုးရိမ်မိပါတယ်။…..၀င်းကိုInternational Day of Action for Rivers and Against
မနေ့က ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နားက မြစ်ဆုံနားမှာ တရုတ် CPI ကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်သွားဖို့ နဲ့ မြစ်ဆုံရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်းကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။